Indlela yokwenza iinciti zifake
Yonke i-fashionista izama ukubonakala iphelele kwizinto zonke kwaye i-stroke ayikho. Enye yeendlela ezidumileyo zokudala i-hairdo egqibeleleyo yincwadana. Nangona kunjalo, abaninzi abafazi bayenqaba ukuyisebenzisa, becinga ukuba isixhobo esinjalo singakhuselekanga iinwele. Kodwa iingcali zobugcisa ziye zafunda ukudala isixhobo esinjalo kwisiseko sendalo. Ngoko ke, a bafazi abakhetha "izidalwa zendalo", kuya kuba luncedo ukufunda indlela yokwenza iincwadana zenzeke.
Izinzuzo zeenwele zasekhaya zihlambulula
Ngaba uke wafumana imeko apho, emva kokusebenzisa iimveliso zokubumba ezilungiselelwe, iinwele zakho zaba nzima ukundibanisa okanye ngaba "zinyanisekile", ezaba nefuthe elibi kumthamo wezinwele? Okanye mhlawumbi ngenxa yokusetyenziswa kwesi sixhobo sele ukhulise i-allergies?
Akukho nto imangalisayo. Ukuba ukhangele ukwakhiwa kweekhemikhali ze-varnish, unokufumana amaninzi amanqaku angakhupha isenzo esicasulayo se-scalp. Ngokukodwa, ukuba ibhinqa linomhlaza.
Emva kokuba wenze iinwele zizitshiza, wena, kuqala, gcina imali yakho, kwaye okwesibini, uya kuba yi-100% eqinisekisiwe yokhuseleko lwayo, kuba ayiyi kuba neezongezo ezinobungozi.
Ukusetyenziswa kweenwele zentliziyo kuzo kunciphisa umngcipheko wokunyuka kweenwele, okuqhelekileyo ukusetyenziswa rhoqo kwezivarnishes.
Kwakhona kubalulekile ukuba ungabandakanyi amathuba okufumana zonke iinkalo eziyingozi ze-varnish ekugqityiweyo xa ichithwa kwindawo yokuphefumula. Emva kwakho konke, nokuba ubambe umoya wakho, akunakwenzeka ukuba ungabandakanyi ukulungiswa kweengqungquthela ezincinci zesikhumba kunye neembumba.
Iingwele zeVunish Recipes
I-Lacquer esekelwe kwijisi lemon
Ukulungiselelwa kwe-hairspray kule recipe yinto ethandwa kakhulu. Ukuze wenze i-varnish, udinga iloni ephakathi, ehlambulukileyo. Emva koko, iqela lemon kufuneka lihlambuluke ukuze lingashiyi i-pulp, kwaye lifake ijusi kwi-lemon ngokwayo nayiphi na indlela efikelelekayo. Ijusi ithululelwa kwisitya esineglasi (200 ml) yamanzi acocekileyo. Kufuneka udibanise ikhasi lemon apha. Umbane obangelwayo kufuneka ugubungele ngokupheleleyo isikhumba.
Isitya esinomxube olungiselelwe sihlanganiswe ngesiqhekeza kwaye sifihliwe kwifriji iintsuku ezingama-5-7. Ekupheleni kwesi sihlandlo, i-lacquer indlu ikulungele. I-leel ye-lemon iphoswe kude, kwaye umbane ngokwawo kufuneka uthululelwe kwisitya esingenalutho kunye nombhobho wokutshiza. Isibhengezo esifanelekileyo kufuneka sifakwe kwiincinci ezihlambulukileyo, emva koko ungaqala ukuzibeka.
I-Hairspray isekelwe kwisonka sesonka
Kule recipe udinga ukuthatha isiqingatha sesonka sesonka. Isonka sinqunywe kwiinqununu ezincinane, sinokuba sikwere, sifakwe kwisitya sesinyithi kwaye uthele i-400 ml (2 iikomityi) zamanzi afudumele. Umxube obangelwayo ekushiseni okuphantsi kufuneka uhanjiswe kwi-thumba, umlilo uphelelwe, kwaye umhluzi obangelwayo ushiywe ukuba ungeniswe kwaye ucolile. Xa umhluzi uguqula phantsi, kufuneka uhlanjululwe uze uthele kwisibhobho esilungisiweyo sokugcoba.
I-lacquer yasekhaya eyiphumela ikulungele ukusetshenziswa. Le recipe ifanelekileyo kubafazi abanemibala emnyama, njengoko i-varnish, ephekwe ngokwale recipe, iya kunika umthunzi omnandi kwiinwele.
Izinwele ezisekelwe kwi-Sugar
Imbali yale recipe ifakwe kwixesha elidlulileyo. Kwakhona basebenzisa oogogo. Nangona kunjalo, kufuneka kucetyiswe ukuba, njengokuba i-lacquers eneengcali ngokulungiswa okuqinileyo, i-lacquer esekelwe ekhaya iqinisa iinwele kwaye iyenze ibenze. Oku kukunciphisa ukulungiswa okuqinileyo. Ngako oko, le recipe kufanele ifakwe kwiimeko ezikhethekileyo.
Ngoko, ukwenza i-varnish kule recipe uzakufuna ushukela (2 tsp) kunye namanzi (200 ml). Ukuqhubela phambili kuyinqweneleka kwiitshizi ezichithwe ngamanzi adibeneyo kwaye ubeke umlilo ocothayo. Umxube, ukuvuselela rhoqo, ukuzisa kwi-thumba. Isisombululo esiphumela siphuhlile kwaye sithululwa kwisitanku esilungisiwe.
Indlela yokunyanzela kakhulu inwele eyomeleleyo neyobuhlungu?
Iifowuni ezimfutshane ezinamaxesha amade
Iinqununu ezintle zeenwele ezinqabileyo
Umaski wokupheliswa kweenwele kunye ne-rosemary
Ubuhle kunye nempilo yeenwele
Izinwele ezinobukhulu - ukunakekelwa okhethekileyo
Ukutya ukutya kweenwele ezinqabileyo nezihle
IHoroscope ngoNovemba 2017 - i-Pisces yabesifazane - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Vula i-pie kunye ne-saury kunye namazambane
Indlela yokugcina uthando nothando emtshatweni
U-Ashton Kutcher wabiza ngolwimi lwesiRashiya lukhulu
Ukuphuhlisa intetho kumntwana omncinci
Iimfene ze-Strawberry-lemon ezine-ricotta
Indlela yokukhetha ukunqumla ikhefu: khetha i-ski efanelekileyo yokukhula kunye nosayizi
Ingulube ene-anyanisi kunye ne-soy sauce
Indlela yokucoca i-oven
Yenza inyama yenkomo ngesonka esisikizi
I-cocktail yobisi kunye nama-cherries